Jony Ive wuxuu ku laaban doonaa naqshadaynta alaabada Apple, laba sano ka dib markii uu nafisay | Waxaan ka socdaa mac
Jony Ive wuxuu ku laaban doonaa naqshadeynta alaabada Apple, laba sano ka dib markii uu nafisay
Taageerayaal badan oo Apple ah ayaa rajeynayey. Jony Ive, wuxuu mas'uul ka ahaa dhowr naqshadood oo Apple ah illaa laba sano ka hor oo la beddelay. Laakiin dhowr saacadood ka hor waxaan si toos ah uga ogaanay bogga Apple, in Dye iyo Howarth kuma qorna agaasimayaasha shirkadda. Sida laga soo xigtay Bloomberg jagadaas waxaa loo qoondeeyay maareeyihiisii ​​hore, Jonathan Ive. Maamulaha Apple wuxuu saxiixay nashqadda Macs fara badan, Ipad iyo xitaa Apple Watch. Laakiin ka hadlida naqshadeynta Apple macnaheedu maahan inaad si gaar ah naftaada ugu hibeyso dhismaha walxaha. Wuxuu sidoo kale hogaamiyay horumarka ugu muhiimsan ee iOS iyo macOS.
Waxa kale oo xusid mudan in websaydhada hoggaanka sare ee Apple aysan liis garayn Alan Dye, VP ee Isticmaalka Wajahadda Isticmaalaha, halka VP ee Naqshadeynta Warshadaha Richard Howarth uusan mar dambe ku jirin liiska. Waxaan u qaadaneynaa inaysan jirin wax isbadal ah oo halkaan ah maadaama Apple aysan waxba ku dhawaaqin, laakiin waxaan la xiriirnay shirkada si aan u cadeeyno waana cusbooneysiin doonaa markaan maqalno.
Fikradaha shabakadaha ee laxiriirta xayeysiiska wey kaladuwan yihiin. Qaarkood waxay u qaateen in Ive uu ka tagayo shirkadda waqti yar, halka kuwa kale ay ahayd uun hakad ku yimid soo saarista wax soo saarka, markii ay Apple dhameystirtay horumarinta Apple Park iyo fikradda naqshadeynta ee dukaamada cusub ee Apple.
Saacadahan, Amy bessetteAfhayeenka Apple wuxuu xaqiijiyay Ive doorkeeda cusub ee safka hore ee horumarinta wax soo saarka:
Marka la dhammeeyo Apple Park, hoggaamiyeyaasha naqshadeynta Apple iyo kooxaha ayaa mar kale si toos ah u soo wargelin doona Jony Ive, kaasoo weli si gaar ah diiradda u saaray naqshadeynta.
Waxaa laga yaabaa in shirkii la qabtay usbuucyo ka hor kaas oo aan horay u sii fiiriyay mustaqbalka qalabka iyo naqshadeynta nidaamyada ay ahayd bar bilowga cusub ee hogaanka kooxda naqshadeynta Apple.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Jony Ive wuxuu ku laaban doonaa naqshadeynta alaabada Apple, laba sano ka dib markii uu nafisay
Sawirradii ugu horreeyay ee dib loo habeeyay Apple Store ee Raleigh, North Carolina
Rasmiga rasmiga ah ee macOS High Sierra, Amazon Prime Video, AirPods sanadka 2018, iyo inbadan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac